फ्रेब्रवरी १८, २०१९
प्रेम पाठक माण्डब्य ऋषिको तपस्थल हो माडी । धार्मिक पुस्तकमा पढिने पाण्डवहरुको गुप्तवासपनि हो माडी । सोमेश्वर काली, बाल्मिकी आश्रम, परशुराम कुण्ड, गोद्दक बाबा, बिक्रम बाबा जस्ता पवित्र धार्मिक भूमीलाई गुट्मुट्याएर बसेको स्थल हो माडी । पूर्वमा...
सेप्टेम्बर ३, २०१५
ग्राबियल रासिन, स्विजरल्याण्ड सन् १९८० मा पहिलो पटक मैले नेपालमा पाइला टेकें । त्यो बेला म २१ वर्षको लक्का जवान थिएँ । म आफूपनि हिमाली देशबाट नेपाल पुगेको थिएँ जहाँका हिमालले मलाई सधैं विशेषखाले उत्प्रेरणा दिइरहे ।...
मार्च २४, २०१५
मिङमा शेर्पा ताप्लेजुंगको त्यो दुखद घटना हिजो मात्र भएको होइन । बिगतमा पनि २, ३ पटक यस्तै बिशाल आगलागी भएर बिरेन्द्र चोक लगायातका स्थानहरु पुरै ध्वस्त बनेका थिए । त्यतिबेला पनि आगो निभाउन नसक्नुको प्रमुख समस्याको रुपमा...
दुई दिनको तालिमले जुनीभरिलाई
मार्च १८, २०१५
निलकण्ठ शर्मा लोग्ने मलेसिया र अरब लागे । वृद्ध सासुससुरा, साना बच्चा मात्रै छन् घरमा । खेतीपाती र घर व्यबहार कसले चलाऊने ? बुढाबुढीको स्याहार कसले गर्ने ? लोग्नेले पाल्नुपर्ने, रेखादेख गर्नुपर्ने भनिन्छ पत्नीको । लोग्नेनै घरमा नभएपछि...
संझिन मन लाग्दैन छापामारका दिन
अक्टोबर २८, २०१४
रेजिना राई हिजो काँडाघारीमा हिँड्दा हामिलाई भनिन्थ्यो ‘कामरेडहरु हो ! हामी लक्ष्यमा पुग्नै लागेका छौँ । हाम्रो गन्तव्य अब त्यत्ती टाढा छैन । गर्वले हामी ढकमक्क फूल्थ्यौँ । लालीगुराँस फूले जस्तै । लाग्थ्यो, जित्नेहरुको मात्र नाम लेखिने...
जातीय संघियता जातीय गृहयुद्द मच्चाउने बिदेशी खेल
अक्टोबर १४, २०१४
दिनेश क्षेत्री पहिचान र आफ्नो जातिको नाममा राज्य भन्ने पनि ठुलो र बिकसित भानिएका ८१० वटा जाति —-गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामां, नेवार, शेर्पा अनि खस आर्य (छेत्री, बाहुन, ठाकुर, दशनामी) । थारु र मधेसी भनिने हरुलाईमात्र...
जुलाइ २०, २०१४
● भानुभक्त आचार्य नेपालमा पत्रकारहरूको आचारसंहिता समय समयमा परिमार्जन हुँदै गएको छ । समय, प्रविधि र मानिसको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तनसँगै पत्रकार आचारसंहिता पनि परिमार्जन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । वि.सं. २०५८ वैशाख ११ गते गोरखापत्रको सनददेखि आरम्भ भएको...
‘मथिंगल हल्लाउने पुस्तक’
जुन २६, २०१३
● प्रतिक ढकाल यो दुई वर्षको अवधिमा धेरै किताबहरु पढिएछन् । तर केही किताबहरुमा मात्र त्यस्तो ‘दम’ थियो जसले मेरो ‘पाठक’ दिमागलाई अझै पनि हल्लाइरहेका छन् । राजा जयस्थिति मल्लले बिक्रम सम्बत् १४३६ मा जारी गरेको कानून...
● डा हरिकुमार श्रेष्ठ / काठमाडौं आज एकछिन घोत्लिएर मनाङ जाँदाको विगतलाई खोतल्ने जमर्को गरेको छु । मनाङ् प्रवेश गरेको आज ३० वर्ष र ८ महिना पूरा भएछ । समयले कति छिटो डाँडा काट्दो रहेछ पत्तै भएन ।...